NEYMAR oo AABIHII ku yiri: “Soo Dhamee heshiiska Real Madrid haddii kale….”. – Gool FM
NEYMAR oo AABIHII ku yiri: “Soo Dhamee heshiiska Real Madrid haddii kale….”.
(Europe) 13 Maarso 2018. Neymar ayaa lacagihii ugu badnaa ebid kubbada cagta ugu soo dhaqaaqay PSG suuqii xagaaga balse durba waxaa iminka si wayn lala xiriirinayaa inuu ka soo dhaqaajin doono kooxda reer France kaddib markii laga soo reebay Champions League.
Sida uu sheegayo warsida SPORT, Neymar ayaa doonaya inuu ku biiro Real Madrid isagoona u sheegay aabihii oo ah wakiilkiisa inuu soo dhameeyo heshiiska ka hor koobka adduunka haddii kale uu la sii joogi doono PSG.
Wiilka reer Brazil ee baryahaan ku maqan dhaawac ayaa lagu wadaa inuu xulkiisa ku hogaamiyo koobka adduunka ee lagu qabanayo Ruushka 14-ka June.
Neymar aabihii ayaa sida la warinayo la kulmay maamulka Real Madrid iyadoo lagu wado inay ku khasiraan laacibkii hore ee Barcelona adduun dhan 355 milyan oo bound.
Wargeyska AS ee ka soo baxa Spain ayaa isna warinaya in shirkadda Nike ay heshiiskan ka caawin karo dhanka dhaqaalaha iyadoo ay jirto in Real Madrid ay xayaysiiso Adidas.
Tababare Ernesto Valverde oo keydka u dhaadhicinaya laacib kaan kulanka Chelsea
"Intaan ka badan uma ciyaari karo Arsenal" - Laacib ka tirsan Gunners oo quus taagan